Hiparitaka eny amin’ireo tsena manokana: tonga ny vary mora, 500 Ar ny kapoaka | NewsMada
Nijery akaiky ny fahatongavan’ny vary tao amin’ny seranan- tsambon’i Toamasina, omaly, ny filoha Rajoelina Andry. Mahatratra 7.000 taonina ity vary tonga ity. Nilaza ny filoham-pirenena fa andiany voalohany, ity tonga ity, mbola hitohy ary hatao isaky ny 20 andro.
Nomarihin’ny filoha Rajoelina, omaly, fa natao ity fanafarana vary ity, mba handrindrana sy hifehezana ny vidim-bary eto amintsika, satria misy tokoa ny manararaotra izany, mahatonga ny vidim-bary hidangana eny an-tsena. Voalohany, misy tokoa ireo mpandraharaha, na mpanangom-bokatra, ohatra, manararaotra manafina ny tahiry ka miandry ny fahalafosan’ny vidim-bary eny n-tsena vao mamoaka ny tahiriny. Faharoa, misy amin’ireo mpandraharaha koa manao fanahy iniaina tsy mamoaka ny tahiriny mihitsy, ka lasa tsy ampy ny tolotra mitaha amin’ny tinady, ny filan’ny tsena. Fahatelo, iaraha-mahalala ny tsy fahampian’ny rano, ilaina amin’ny fambolem-bary, mahatonga ny tolotra eo amin’ny tsena tsy ho ampy.
Vahaolana hamahana izany ny fanafarana vary any ivelany, nefa koa amin’ny vidiny zakan’ny isan-tokantrano. Koa, nambaran’ny filoha Rajoelina Andry, omaly, fa hamidy 500 Ar ny kapoakan’ity vary vao tonga ity, manerana an’i Madagasikara. Haparitaka manerana an’ i Madagasikara, ity vary ity. Nomarihiny fa vary tsara kalitao “riz de luxe” ity vary vao tonga ity fa tsy ilay fantatra mahazatra , vary “stock”.
Nilaza koa ny filoham-pirenena fa hatomboka amin’ny renivohi-paritany enina izany, ary hitohy any amin’ny distrika sy ny kaominina rehetra avy eo.
Isaky ny 20 andro
Nilaza ny filoha Rajoelina fa ho avy isaky ny 20 andro ny vary nafarana avy any ivelany. Mahatratra 7.000 taonina ny andiany voalohany, tonga tao Toamasina, omaly. Ho 8.000 taonina ny andiany faharoa. Amin’ireo renivohi- paritany enina, ho tonga mivantana any amin’ny seranan -tsambon’i Toliara ny hiantoka ny tapany atsimon’ny Nosy. Nilaza ny filoham-pirenena fa hisy isaky ny 20 andro ny fahatongavan’ny vary avy any ivelany, toy izao, hifehezana ny vidim-bary eto amintsika.